Ekike Ecuador nke a na-ahụkarị, olee otu esi eji ejiji? | Akụkọ Njem
Dị ekike nke ecuador
Maria José Roldan | | America, omenala, Ebe njegharị, Ecuador
Ecuador bụ obodo dị na mpaghara Andean, ọ bụ ebe obibi maka ọdịbendị na ọdịnala bara ụba, nke ga-ejedebe na-egosipụta n'ụdị uwe ndị ka dị n'ọtụtụ obodo. You maara ihe ụdị ejiji ndị Ecuador?
Ọ bụrụ na ndị oké iche iche nke-ahụkarị Ecuadorian ekike enyocha, ikekwe ikpe Uwe dị ka mpaghara Otavalos A na-ahụ ya ka iji akwa blanket na-acha anụnụ anụnụ na-ekpuchi ahụ ya na nke ejiri ihe mkpuchi a kpara n'úkwù, na-ewepu ngwa ndị dịka ọla olu na ọla aka. A na-ejikọkwa ntutu mgbe niile nke ọma, na-akpụ ọdụ.
Na mpaghara Andean nke Saraguro anyị ga - enwe ike ịchọta iji ponchos, nke n'ozuzu ya nwere ụda ojii na nkwado nke oji, ihe nnọchianya nke ike, nke dị iche na iji okpu ọcha na eriri akpụkpọ anụ buru ibu.
N'ime oke ohia nke Ecuador ị nwere ike ịchọta nnukwu myirịta na ihe dị n'akụkụ nke ọzọ nke ókèala na Peru, ebe ị ga-ahụ ọnụnọ ihe olu mara mma site na iji nkuNa mgbakwunye, ị na-ahụkarị akwa ma ọ bụ uwe ndị nkọwa ha kachasị na-ese na eserese emere na ya.
Ma, ịchọrọ ịmatakwu banyere ụdị ejiji nke Ecuador? Echefula nkọwa!
1 Ekike Ecuador nke ejiji mara mma
1.1 Stylesdị dị iche iche site na ọdịbendị dị iche iche
1.2 Womenmụ nwanyị obodo ndị dị na Sierra Leone
1.3 Agbụrụ nke ohia mmiri ozuzo nke Ecuadorian Amazon
1.4 Obodo nke Coast
1.5 Ndị Montubio
2 Otu esi eji ejiji ma ọ bụrụ na ị gaa Ecuador
3 Etu esi eji ejiji eme Ecuador
3.1 Ọ bụrụ na ị bụ nwoke
3.2 Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị
4 Otu esi eji ejiji ejiji na Ecuador
Ekike Ecuador nke ejiji mara mma
Stylesdị dị iche iche site na ọdịbendị dị iche iche
Costdị ejiji Ecuador nke ọdịnala ọdịnala ka na-ewu ewu n'etiti ndị Ecuador, n'eziokwu enwere ụfọdụ agbụrụ ndị ka na-azụ ma na-ere uwe ọdịnala iji na-eyi ha oge niile. N'aka nke ọzọ, e nwere omenala dịka "los colorados" si Santo Domingo nke tufuru uwe ọdịnala ha kpamkpam, a na-ahụ uwe ejiji mpaghara naanị dị ka ebe ndị njem nlegharị anya. Ecuador nwere ọtụtụ agbụrụ nwere ọdịbendị na ọdịnala dị iche iche, yabụ enweghị uwe ejiji mba na nke naanị na Ecuador.
Dịka ọmụmaatụ, uwe ọdịnala nke mpaghara Otavalos bụ eleghị anya ọ kachasị ama na ọ kachasị na Ecuador. N'ọtụtụ obodo dị na ugwu, ha na-ejikwa uwe ha mara mma dị iche iche, dị ka okpu pụrụ iche, ponchos ma ọ bụ uwe elu nwanyị nke ọtụtụ ndị Ecuador na-ejikarị.
Womenmụ nwanyị obodo ndị dị na Sierra Leone
Mụ nwanyị si obodo dị iche iche na Sierra Leone na-eyi uwe mwụda mara mma nke nwere agba mara mma yana ihe ịchọ mma na okpu. Mana obodo, ịdị iche iche, nwere ike ịnwe ọdịiche nke ha na uwe ma ọ bụ okpu. Womenmụ nwanyị na-eyikarị ajị ajị ajị dị ka ụzọ isi zụta ihe ma ọ bụ ụmụ ọhụrụ n'azụ nwanyị.
Agbụrụ nke ohia mmiri ozuzo nke Ecuadorian Amazon
Agbụrụ dị iche iche sitere n'oké ọhịa mmiri na-ekpo ọkụ nke Amazon nke Ecuadorian Amazon ka na-eyiri ákwà mkpuchi isi ha na ngwa ndị ọzọ nwere nkọwa agbụrụ ma ọ bụ nke agbụrụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-eto eto nke agbụrụ ndị a nwere ike ikpokọta ma ọ bụ dochie ihe ndị a na-eyi uwe na ndị ọzọ nwere ụdị ọdịda anyanwụ.
Obodo nke Coast
Obodo Osimiri dị n’etiti ugwu na oke osimiri, ọ tufuru ọtụtụ omenala na ọdịnala ọdịnala. Uwe ọdịnala ha dị iche iche n'ọtụtụ ọnọdụ adịghị iche na nke ndị bi n'ugwu. Agbanyeghi na onwere obodo di n’akụkụ oke osimiri na enweghi akwa omenala.
N'ime obodo Montubio (ọ bụ mpaghara Manabí, Los Ríos, Guayas na Santa Elena) ha pụtara maka okpu ha (ụdị ehi) ha na-ebukarị mmaHa na-eyi buutu buutu roba mana ha enweghi ekike ejiri mara ha.
Ma ebe enwere otutu obodo, odighi uwe ndi amara nke juputara na Ecuador.
Otu esi eji ejiji ma ọ bụrụ na ị gaa Ecuador
Uwe mara mma nke ndị Ecuador na-abụkarị ihe ngosi nke mpaghara ebe ha si. Dịka ọmụmaatụ, ụmụ nwoke yi ponchos na-acha anụnụ anụnụ, uwe ogologo nwa ehi, na okpu ga-esi na mpaghara Quito.. Ihe omuma atu ozo bu ndi nwanyi nke Andes ndi na-eyi uwe ojii na-acha ocha, ndi nwere shawls nwere okpu na okpu gold na mgbaaka coral uhie. A naghị atụ anya ndị ọbịa na-aga Ecuador dịka ndị njem nleta iyi uwe ọdịnala ndị a, mana ị nwere ike. Ọ bụrụ na ị kpebie iyi uwe otu ha si eme ya, a ga-ewere gị dị ka onye dị mkpa site na inye ụdị uwe a uru.
Etu esi eji ejiji eme Ecuador
Iji ejiji ejiji na Ecuador ma na ị nwere ike ịga dị ka uwe nke mba ahụ ị nwere ike ịgbaso ndụmọdụ ndị a:
Ọ bụrụ na ị bụ nwoke
Yiri uwe gbara ọchịchịrị na tie maka nzukọ achụmnta ego.
Yiri uwe na uwe ma ọ bụrụ na ị ga-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ Ecuador.
Yiri uwe elu nwere mkpokọta ma zere okpu n'ụlọ nri ma ọ bụ n'ụlọ ezinaụlọ.
Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị
Yiri uwe elu nwanyị, sọks na ikiri ụkwụ dị elu yana uwe mwụda ma ọ bụ ogologo ọkpa ma ị ga-aga nzukọ azụmahịa ma ọ bụ nzukọ ọrụ.
Uwe kwesịrị ịbụ mgbanwe ka ọ ghara ịbụ ihe siri ike ma ọ bụ belata. Uwe nwere ike ọ gaghị adị mkpụmkpụ ma ọ bụ na-enye echiche.
You nwere ike iyi uwe ọkụ, uwe ma ọ bụ uwe ogologo ọkpa iji rie ma ọ bụ gaa leta mmadụ n'ụlọ. Uwe mmanya mmanya na-arụkwa maka ihe omume emebere, ọ bụ ezie na uwe dị ala na-agbarụ agbarụ.
Otu esi eji ejiji ejiji na Ecuador
Iji yikwasị uwe nkịtị, ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị kwesịrị iyi sneakers, uwe egwuregwu, akpụkpọ ụkwụ hiking ... nke a maka izu ahụ dị mma. Ha nwekwara ike na-eyi sweatshirts ma ọ bụ na-agba ajị agba na ngwụsị izu.
Echiche ọzọ bụ iyi akwa jeans, uwe elu, ma ọ bụ uwe elu nwanyị iji gaa ebe ọha na eze. Ejiri eji ejiji eji eji eji eji eji eji eji mmiri eji eji eji eji eji mmiri na ebe a na-egwu mmiri.
Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ nke ụdị ejiji ndị Ecuador na ụdị uwe kachasị mma na ọ dị mma na ị maara ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga Ecuador na ejiji dịka ebe ahụ. Ọ bụ ezie na m na-adụ gị ọdụ ka ị gwa onwe gị dabere na mpaghara ebe ịchọrọ ịga ka ị nwee ike ịchọpụta ụdị ụdị ụdị uwe ha na-eyikarị ma ọ bụ site na ụda olu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọ uwe dịka omenala ha si dị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » omenala » Dị ekike nke ecuador
Dị ka Patricia Lurssen si kwuo, onyogho ndị na-eto eto na uwe ogologo ọkpa bụ nke ụmụ nwoke na ngalaba Huehuetenango dị na Guatemala. Kpachara anya na ihe oyiyi n'ihi na ha na-eme ka ọgba aghara.
Zaghachi Isabel Sisimit Esquit
Ebe 8 dị n'ụwa machibidoro ụmụ nwanyị iwu